Muqdisho oo cagta saartay wadadii horumarka & dib u dhiska”Sawiro” | Warfaafiye
Warfaafiye Sawirada	Muqdisho oo cagta saartay wadadii horumarka & dib u dhiska”Sawiro”
Sep 3rd, 2012 – by admin0
Shaki kuma jira in Muqdisho ay ka soo kabaneyso dhibaatadii 21 sano ka dul dhacayay, sanad ka hor qofka Muqdisho arka wuxuu qirayay in caasimada Muqdisho aheyd tan ugu burbursan caalamka ee kooxo iska soo horjeeda ku dul dagaalameen.
Dadaal iyo maamul ka wanaagsan kuwii horay u soo maray oo ka hirgalay Muqdisho waxay bannaanka soo dhigtay quruxdii lagu yaqiin 21 sano ka hor, waxaana laga yaabaa bilaha soo socda in sida ay hada u muuqata mid ka sii bilicsan ay sii ahaan doonto, taasoo ugu wacan isbadalada ka dhacay iyo dadaalka badan ee qurba joogta oo dib ugu laabtay ku bixyeen, waxayna xoogga saaray maalgashiga iyo dhismooyinka quruxda badan ee ay yeelaneyso hada.
Dhismooyinkaan idiin muuqda waa kuwo cusub oo labo sano gudahood lagu soo kordhiyay magaalada Muqdisho, qaarna waa kuwii hore ee burbursanaa oo dib loo dayactiray.
Muuqaalkani waa mid ka mid ah Baararka lagu soo kordhiyay Muqdisho
Qurba joogta dib ugu laabaneysa Muqdisho ayaa kusoo kordhiyay magaalada dhismooyin ay ka minguuriyeen wadamada ay ka tageen, iyo Hoteello kuwa lagu nasto iyo baararkooda oo horay Muqdisho ugu dhisneyn.
Waxaa hubaal ah in Caasimada Muqdisho ay tartan xagga horumarka ah kula jirto wadamada kale ee Afrika, hadii isbadalka dhacay sidan uu kusii socdana Muqdisho ay ka tegi doonto caasimado ka faa’iideystay burburkeeda.